မီတာခတက်လို့ မီးမပျက်တော့ဘူးထင်မိတာ ခွေးထက်မိုက်တာပဲလို့ ပြောလိုက်တဲ့ ကျော်ကျော်
Every Time Story
Posted by E.T.S on August 15, 2019
နားကပ် ဝယ်ပေး မယ်ပြောပြီး ဦးလေးက ၁၄ နှစ်အရွယ်တူမကို သားမယားပြုကျင့်
စည်ပင်က ဖျက်စီးတာခံလိုက်ရတဲ့ အသီးသည် အဘဆီ အရောက်သွား လှူခဲ့တဲ့ ရွှေပိုးအိမ်
ဗိုလ်ချုပ်ဈေးမှာ ဖြစ်ခဲ့တဲ့ ဈေးသည်အဘ နဲ့ စည်ပင် အကြောင်း
ကျော်ကျော်က အနုပညာလောကမှာ ပရိသတ်တွေအားပေးမှုကို ပိုင်ဆိုင်ရရှိထားတဲ့ အနုပညာရှင်တစ်ယောက်ပါ။ ပရိသတ်တွေကို ဖော်ရွေစွာဆက်ဆံတတ်သူတစ်ယောက်ဖြစ်ပြီးတော့ သူ့ရဲ့ အပြောင်အနှောက်လေးတွေကြောင့် ပရိသတ်အချစ်တော်တစ်ယောက်ဖြစ်နေရတာဆိုလည်း မမှားပါဘူး။ သူငယ်ချင်းဖြစ်သူတွေအပေါ်မှာလည်း မာန်မာနမရှိဘဲ ဆက်ဆံတတ်သူတစ်ယောက်ပါ။
လက်ရှိမှာတော့ ကျော်ကျော်က ချစ်ရတဲ့ သူငယ်ချင်း ဆုမြတ်နိုးဦး၊ ညီထွဋ်ခေါင်တို့နဲ့အတူ အပြောင်အနှောက် TiKTok လေးတွေကို ကစားနေတာလည်း ဖြစ်ပါတယ်။ကျော်ကျော်ဟာ တစ်နေ့တာခံစားမှုတွေနဲ့ အဖြစ်အပျက်တွေကို လူမှုကွန်ရက် စာမျက်နှာထက်ကနေ ဖော်ပြတတ်သူတစ်ယောက်ဖြစ်ပြီးတော့ လတ်တလောမှာ ဖေ့စ်ဘွက်စာမျက်နှာမှာ ဂယက်ရိုက်နေတဲ့ မီတာခတက်တဲ့ ကိစ္စနဲ့ ပတ်သက်ပြီးတော့ ကျော်ကျော်က လူမှုကွန်ရက် စာမျက်နှာထက်ကနေ ဖော်ပြထားတာမို့ သိခဲ့ရပါတယ်။
မီတာခတက်တဲ့ ကိစ္စက ပရိသတ်တွေကြားမှာ ရေးပန်းစားနေတဲ့ ဂယက်ရိုက်ခတ်မှုတစ်ခုဖြစ်ခဲ့ပြီး မီတာခတက်လို့ မီးမပျက်တော့ဘူးထင်မိတာ ခွေးထက်မိုက်တာပဲဆိုတဲ့ အကြောင်းကို “မီတာခတွေ တက်တော့ မီးမပျက်တော့ဘူးလို့ထင်ခဲ့မိတယ်။ခွေးထက်မိုက်ခဲ့တာပေါ့ကွာ “လို့ကျော်ကျော်က လူမှုကွန်ရက် စာမျက်နှာထက်ကနေ ဖော်ပြထားတာဖြစ်ပါတယ်။ဆယ်လီကမ္ဘာပရိသတ်ကြီးရေ မီးမပျက်တော့ဘူးထင်မိတဲ့ ကျော်ကျော်အတွက် မှတချက်လေး ပြောပြခဲ့ပါဦး….
E.T.S is your news, entertainment, music fashion website. We provide you with the latest breaking news and videos straight from the entertainment industry.
© 2020 E.T.S